Makambani eWiricheya anoona mamwe mabasa akarasikirwa neCOVID | Karman®
Inofungidzirwa Kuverenga Nguva: 9 maminitsi
hwiricheya makambani anoona mamwe mabasa akarasika gore rino kupfuura nakare kose. Isu tinotora nzira yakawedzera pano yemushumo we2020-2026. Hongu Ndizvozvo.
Tichafanira kutarisa kune ramangwana makore mashanu. Kubva 5 yanga iri nyaya yakaipa kwazvo munhoroondo. Iyo denda yakagadzira inopfuura 2020% kufa muUS. Izvi zvinoshandura kune vangangoita 1k kufa. Iine mamirioni makumi matatu nemakumi matatu emamiriyoni ehuwandu hwevanhu, ihwo hukuru hwakakura. Iye zvino lets dig kupinda.
Iyo "Lightweight Folding Wiricheya Market Forecast "ongororo yakaitwa neGlobal Indasitiri.
Chirevo chine tsananguro, kupatsanurwa, kunyorera pamwe neyakagadzirwa indasitiri. Iyo Lightweight Kupeta hwiricheya Chirevo chinopa kuongororwa kunosvika kure kweakakosha musika masimba uye freshest maitiro. Pamusoro pe, zvakagadzira rondedzero yakakosha yeiyo Lightweight Folding Wiricheya niche iyo inopihwa mushumo.
Kupfuurirazve, inoratidza zvakare musika wedunhu, vatambi vanozivikanwa vemusika, pamwe nezvikamu zvakawandisa zvemusika nezvikamu zvine huwandu hwakakura hwezvikamu zvakasiyana pamwe nekushanda kwavo.
Zvikamu zveMusika zvinoratidzwa mumushumo uyu zvinosanganisira:
Lightweight Folding Wiricheya Mhan'ara Zvinangwa
Chirevo ichi inopa a kunongedza kwakanangana nekuvandudza zvinhu zvakatariswa.
Inopa maonero anotarira-mberi pazvinhu zvakachinja zvichibvumira kana kudzora kusimudzira kwemusika.
Iine yakanangana nyaya yekudzidza yekuvandudza makwikwi ezvinhu uye inoramba iri pamberi pevanokwikwidza.
Sezvo zvichibatsira mukugadzirisa pane sarudzo dzebhizinesi dzakadzidziswa nekuve neruzivo rwakazara rwemusika uye nekuita yepamusoro-soro kuferefeta zvidimbu zvemusika.
Saka zvino inopa makore mashanu ongororo yakaongororwa zvichienderana nekuti musika unofungidzirwa kukura sei.
Iyo inobatsira mukuziva inodiwa chikamu chikamu uye yavo fungidziro.
Dunhu uye Nyika-chikamu Kuongorora
Iyo Yakareruka Folding Wiricheya musika unoongororwa, uye data rehukuru hwemusika inopiwa nematunhu akapatsanurwa muchimiro chenyika.
Matunhu mana ekutanga akaisirwa muLightweight Folding Wiricheya musika mushumo ndeye North America, Europe, China, uye Japani.
Uyezve mune maonero epasirese, matunhu muUS, Canada, Germany, France, UK, Italy, Russia, China, Japani, South Korea, India, Australia, Taiwan, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Vietnam, Mexico, Brazil, Turkey, Saudi Arabia, UAE, zvinosanganisirwa muongororo iyi. Idzi ndidzo dzimwe dzenyika.
Chirevo ichi chinofukidza nyika-huchenjeri uye hukuru-musika-huchenjeri musika saizi yechirongwa 2015-2026. Naizvozvo zvinowedzera kufukidza saizi yemusika uye fungidziro na mhando uye nechikamu cheKushandisa maererano nesaizi yekugadzira, mutengo, uye mari yenguva ya2015-2026. Kazhinji, iyo mutengo aburuka. Izvi zvinonyanya kuitika kudivi rekutengesa. Chikamu chikuru chayo semhedzisiro kune iyo mitengo yeinternet. Ingotarisa maitiro. Iwo marondera mitsara ane yakapihwa kukosha kukuru kune vashandisi vekupedzisira. Padivi rekugadzira, iyo mitengo ndakwira kumusoro. Asi izvi zviyero pamwe nekumwe kugadzirwa. Kugadziridza senge kushandisa michina. Saka kana iyo mbishi yekuwedzera yekuwedzera ichiwedzera seyakajairika mutsetse. Ipapo zvaizoonawo nzira yekushandira zvakatenderedza izvo. Icho chikonzero ndechekuti ivo chete vatambi vepasirese ndivo vane nzira dzekudzingirira iyo inogara ichiwedzera vhoriyamu.
The Yakareruka Kupeta Wiricheya chirevo chiunganidzwa cheruzivo rwe pragmatic, huwandu uye huwandu hwekufungidzira nenyanzvi dzeindasitiri, mupiro unobva kune vanoziva maindasitiri uye vanobatsirana nemaindasitiri muketani yakakosha. Pane musiyano mukuru pakati pehuremu hwakaenzana uye uremu hwakareruka.
Icho chikonzero nei iri nekuti hurumende zhinji dzinopa rubatsiro chete ipa isingadhuri kupinda.
*** Izvo zvinodhura zvigadzirwa ndeye inonakidza data yakagadzirirwa kutarisa.
Uku kuwirirana nePPP iri kutenga simba parity. Mune denda iwe unofunga kuti PPP inomirira chimwe chinhu. Asi mune ino kesi, hachisi chokwadi
Iko kune kuenderana kwakanangana kune izvo nyika inokwanisa kupa pachena mahara kana izvo izvo vanhu vanoda uye vanokwanisa kushandisa muchivande mubhadharo. Chiedza chinogara chiri nani. Muchokwadi nano kabhoni technology ndiyo inotevera nhanho. Vamwe vakafunga kuti yaive titanium. Asi ivo vari kukanganisa. Ikozvino ingori nyaya yezvinhu zvishoma zvinozotanga kushanda. Imwe kupa uye kudiwa. Imwe iri kusvika pachiyero.
Izvi zvakafanana naTesla. Dai Elon Musk asina kukurumidzisa izvo zvisingadzivisike, saka isu taizoramba tichipambadza mamwe makore gumi nemakumi matatu tichifambira mue-mota. Hongu Ndizvozvo. Akatomhanyisa isu mune ramangwana. Iye akaita bheji uye rakabhadhara. Saka mune iyo DME nyika. Tinoona zvakafanana. Pamwe hurumende "ichaikurumidzisa". Kana kambani yemubatanidzwa ichaita. Izvo zvisingadzivisike zvichaitika. Iyo inobatsira kuendesa inogona kuve iri mushambadzi mutengesi.
Dhata Kuputsa kwe Wiricheya Mhando
Yakareruka Kupeta Wheelchair Kuputsa Dhata neKushandisa
Kufungidzira kweMusika Saizi
Wakakura sei musika? Zvakanaka panofanirwa kuve nechidzidzo chenhoroondo pane izvi kutanga.
Sezvauri kuona kuti kumusoro-pasi uye pasi-kumusoro marongero anoshandiswa kufungidzira nekusimbisa hukuru hwepasi rose musika uye kugona kwekambani. Izvi zvinogona kuwedzera kusvika kudunhu redunhu, chigadzirwa mhando, uye chinangwa.
Chinangwa chechigadzirwa chekurapa chinotemerwa nevashandisi vekupedzisira uye zvavanoda zvekurapa. Zvese zvinhu zvinotenderera pane izvo zvekurapa kutanga.
Iko fungidziro yemusika mune uyu mushumo inoramba yakavakirwa pakutengesa mutengo. Isu hatibatanidze zvidzikiso kubva muchidzidzo chino. Coupons haina zvakare kutariswa.
Saka ikozvino isu tinogona kutarisa vatengesi vakuru. Zvakare isu tinogona kuona yavo mari, muzana kutsemuka, misika migove, uye kukura mwero. Ipapo isu tinogona kuita ongororo yemisika yezvigadzirwa iyo yakatsanangurwa kuburikidza neyechipiri masosi.
Ivo vanofanirwa kuverengerwa kuburikidza neakanyanya masosi apo zvinogoneka. Makambani akazvimirira anogona kunge asina chiyero chakajeka.
Iyo yekugovana yemusika kudzidza, yakapihwa kune ese zvikamu uye matunhu. Iwe unogona kuzadzikisa kuburikidza neyakagadzirwa mashandisirwo mwero uye wepakati kutengesa mutengo.
Ikoko zvakare kwave kwakave nedheti rakagadziriswa kuburikidza nekutanga kwekutsvaga uye kuongororwa. Iwe unogona ipapo kuwana iyo yekupedzisira yakawanda uye yehunhu data.
Saizi yemusika yemisika yepamusoro-chikamu uye zvikamu zvayo zvidiki zvinoongororwa nechikwata chedu.
Iko simba rekuwedzera kwemitengo, hwiricheya hupfumi, uye hutongi uye shanduko yemitemo kana zvimwe zvinhu zvinoonekwa seyakafungidzirwa musika wedu.
Dhata rako rinobva rasanganiswa uye rakabatanidzwa nezvakadzama zvekushandisa uye kuongorora kubva ku "QYResearch" uye zvinoratidzwa mune uyu mushumo. Neiyi uptrend mukuda kwevana vacheche pasi rose, hwiricheya makambani anoona mamwe mabasa. Izvi zvakanangana nekugadzira uye varidzi vemaki. Kugovera kwacho kunogona kusiyana nyika nenyika.
hwiricheya Kuputsika Kwemusika
pashure yose dhizaini yemusika nekutarisisa kwehuwandu hwepamusika; kukura kwemashamba kukura; kufungidzira; kuparara; uye data triangulation.
hwiricheya Market Overview ne hwiricheya makambani anoona mamwe mabasa Akarasika
Kutsvaga Kwemusika Remangwana (MRFR) inofunga kuti iyo wiricheya Saizi yemusika inogona kusimuka kufambira mberi pachiyero che2.80% pakati pe2019 na2024. Iyo yazvino wiricheya musika Statistics inoratidza kuti kukosha na2024 kunogona kuve USD 9,554.07 Million, zvichireva kukura kwakanaka tarisiro.
COVID 19 Zvehupfumi Zviitiko
MISA KUSVIRA 19 ZVINO
Vakapa COVID-19 kuongorora kwehupfumi pamwe nemushumo, uye kuongorora kwakadzama kwakatumira chirwere checorona hutachiona. Izvi zvakaramba zvichiitika wheelchair yemafuta makambani anoona rakawanda basa rakarasika. Izvo zvakagadziriswa zvitoro ndezvaamai uye pops. Kudzoka muna 1980, pakanga paine huwandu hwakawanda hwezvitoro zvaibuda kwese kwese. Mari dzekudzosera dzaive dzakakwira. Vanhu kwese kwese kwavakakwanisa kuita purofiti uye kukunda. Paive nekushomeka kukuru muzvitoro zveDME. Zvigadzirwa zvekurapa kunodiwa mhinduro yakachipa zvakare.
Naizvozvo, makambani makuru anozadza mukaha uyu uye kuda. Vakatengesa kubva kuChina. Mazhinji eaya maitiro akapfuurira kusvika kuma1990. Zvimwe zvitoro zvakawanda zvakagadzirwa zviri nyore nekuda kwebatsiro. Mari yaive akaita nemabasa akagadzirwa. Zvakare uye nezvimwe uye zvakawanda zvigadzirwa. Iyo HCPCS makodhi uye mari chaiyo yakachinjwa. Idzi shanduko dzakasiyana nyika nenyika zvakare. Saka iwe unogona kuona maitiro aive akabudirira kune vese. Kunyangwe iro rezvekurapa rakawana chibvumirano chakanaka mairi.
Masasi anoputika egeriatric uye zviitiko zvinokwira zvezvinetso zvinoda wiricheya rutsigiro rwakafambisa kukura kwemusika kwe mavhiripu.
Nekuda kweizvozvo, izvi zvichaenderera mberi wedzera wiricheya purofiti yekambani. Ipapo vanogona kuona mamwe mabasa akagadzirwa. Zvichazadzikiswa.
Kuenderera mberi kuri kuitika muhutano hwehutano uye huwandu huri kukura hwe vakaremara varwere vanobatsirawo iyo indasitiri yewiricheya. The World Health Organization WHO inotaura kuti ingangoita 15% yehuwandu hwepasi rose unoenda kune imwe nzira ye kuremara. Kuremara kuri kwakajairika pakati pevanhu vakura uye vanhu vane chirwere chisingaperi, izvo zvakakonzera kukura kwakakosha kweiyo hwiricheya musika.
hwiricheya Musika Key Players & hwiricheya makambani anoona mamwe mabasa Akagadzirwa
Uyezve, the hwiricheya saizi yemusika muMEA iri kukura zvakadzikama nekuda kwekuwedzera kwekuziva. Izvi zvaive zvichisanganisira nzira dzesarudzo yekurapa uye kusimuka kwezvirongwa zvehurumende zvakanangana nekupa michina yekubatsira.
Vakakosha Vemusika Vatambi mu hwiricheya Industry:
rudado Mobility Products Corp. (US), Sunrise Medical (Germany), GF Health Products Inc. (US), Drive Medical (US), Ottobock (Germany), Levo AG (Switzerland), Quantum Rehab (US), Invacare Corporation (US) , Karman Healthcare, Inc. (iyo US), Medline Industries, Inc. (iyo US), mamwe emakambani anoita zvepamusoro ari kushanda mumusika wepasi rose.
S-115 Inowanikwa mune dzinopfuura nyika 22! Tsvaga imwe nhasi!
Iyo Yakareruka Folding Wiricheya chirevo kuunganidzwa kwakakodzera kweruzivo rwese rwunodiwa kuti unzwisise iyo wheelchair upfumi.
Uye zvakare, inobatsira pekugara, maindasitiri, mabhizinesi, hurumende, nevamwe vanoita basa kuti vashandise matekiniki avo anoenderana nemusika zvinoenderana nezvakarongwa pamwe nemafambiro ari muLightweight. Folding Wiricheya.
Naizvozvo, parutivi peizvi, chirevo ichi chinopa ruzivo runonzwisisika rwemitemo iripo, mitemo, pamwe nematanho.
Semagumo, hwiricheya makambani anogona kuona akawanda mabasa akarasika uye munhu amai uye pop chitoro mhando.
Varidzi veMishonga Yezvokurapa: Tsvaga Imwe Yaunogona Kuvimba
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.